Maxay tahay arrinta beesha caalamka u ballan-qaadeen ra'iisul wasaare Rooble? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay arrinta beesha caalamka u ballan-qaadeen ra’iisul wasaare Rooble?
Maxay tahay arrinta beesha caalamka u ballan-qaadeen ra’iisul wasaare Rooble?
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisal wasaaraha xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhawaan kulan la qaatay beesha caalamka, kaasi oo looga hadlayey arrimaha doorashooyinka iyo is-bedelka siyaasadeed ee dalka.
“Kulanka uu ra’iisal wasaaraha la yeeshay beesha caalamka waxa uu ahaa sidii ay B/caalamka ugu taageeri laheyd qabashada doorashadii ay dadka ka wada-sugayeen iyo sugida amniga dalka, balan-qaad wanaagsan ayey u sameeyen, weyna garab istaagsan yihiin dadaalka ra’iisal wasaaraha,” ayuu yiri.